Soomaaliland oo Jabuuti kula tartameysa dhoofinta Shidaalka laga helay Ethiopia. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASoomaaliland oo Jabuuti kula tartameysa dhoofinta Shidaalka laga helay Ethiopia.
October 29, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Soomaaliland oo Jabuuti kula tartameysa dhoofinta Shidaalka laga helay Ethiopia.
Warqaat.Com:-Xukuumadda Somaaliland ayaa Weydiisatay Ethiopia in ay u weeciso dhuumaha qaadaya Saliidda iyo shidaalka laga helay Gobolka Soomaalida ee Ethiopia oo la doonayo in la dhoofiyo.
Somaliland waxaa ay la tartameysaa Jabuuti oo horay Ethiopia ugula hadashay in ay noqoto meesha laga dhoofinaayo Saliida Itoobiya.
Codsiga ka yimid Somaliland ayaa waxaa uu ku soo aadayaa xilli Dolwadda Itoobiya ay Bilaabeeyso dhoofinta khayraad Dabiici ah oo lagu qiyaasay 8 trillion cubic feet, waana Dadaalkii ugu Dambeeyay ee Somaliland oo 30 sano muddo ku dhow dadaaal ugu jirtay Aqoonsi Caalami ah ay ku dooneeyso in ay ku hesho Mashaaariic shisheeye maadaama ay ku taalo bar muhiim ah oo saaran badda cas.
“Maxaan loogu soo direyn Saliidda ceeriin iyo Gaaska Dabiiciga ah ee laga soo saaray Ceelasha Ogadenia een looga dhineeyn Dekedda Berbera” ayuu yiri Wasiirka Macdanta iyo Tamarta Jaamac Maxamuud, sida lagu baabacay Warbaahinta Bloomburg.
Dekadda Berbera ee Soomaliland ay dooneeyso in Khayraadka Dabiiciga ah laga dhoofiyo waxay Ceelasha khayraadka u jirtaa 400 KM halka Dekedda Jabuutina ay u jirto 700KM, sidaas darted Somaaliland waxay aaminsantahay in Masaafadda dhow darteed ay ku guuleeysan doonto tartanka ay kula jirto Somaliland.
Dalabka Somaaliland ayaa waxaa uu tartan kula jiraa Jabuuti oo sanado badan ka faa’iideeysaneeysay muhiimadda ay leedahay meesha ay Gobolka uga taalo iyo marti galinta Dowladda Dhaqaalaha Aduunka ku tartamaaya ee Shiinaha iyo Mareeykanka.
Itoobiya ay Saami dhan 19% ay ku lahayd Heshiis Dekadda Berbera ku saabsan oo ay gaareen Soomaliland, Imaaraadka iyo Itoobiya.
Waxaana jira War sheegaya in Itoobiya ay joojisay Saamigii ay ku lahayd Heshiiska Berbera.
705,357 total views, 2,574 views today
705,357 total views, 2,574 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
705,233 total views, 2,574 views today
705,233 total views, 2,574 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
705,263 total views, 2,574 views today
705,263 total views, 2,574 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
705,325 total views, 2,574 views today
705,325 total views, 2,574 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
705,379 total views, 2,574 views today
705,379 total views, 2,574 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]